မျိုးမြင့်ချို: အမျိုးသားလုံခြုံရေး ဆိုရာဝယ် (National Security)
at 5:42 AM Posted by myo0comments
(မိတ်ဆွေတဦးက မေးလ်ထဲလှမ်းပို့လို့ဖတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ တွေးဆစရာတွေရတာနဲ့ ပြန်တင်လိုက်တာပါ။ ဘယ်သူရေးမှန်းမ သိသေးပါ။ မေးထားပါတယ်။ သိတာနဲ့ ဆာင်းပါးရှင်အမည်နဲ့တကွ ပြန်ဖော်ပြပါ့မယ်။ မိတ်ဆွေတို့ သိထားပြီးဆိုလည်း ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ခင်မမျိုးမျိုးလို့ထင်ပါတယ်)
(စကားချီး- အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကို အသုံးပြုပြီး၊ စစ်အာဏာရူးတွေဟာ ပြည်သူတွေကို ဖိနှိပ်ခဲ့ကြတယ်။ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတဲ့ ကာလုံကို အသုံးပြုပြီး၊ အတုအယောင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကြိုးကိုင်ခဲ့ကြတယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုတာ အဲဒီလို စစ်အာဏာရှင်လုံခြုံရေး (military regime security) ကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာတွေနဲ့ မူဝါဒတွေသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း၊ မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း၊ လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်းတို့တွေက ပေါ်ထွက်လာနိုင်စရာကို မရှိဘူး။ ဒါတွေဟာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြဿနာများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ပေါ်ထွက်လာကတည်းက အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို စစ်အာဏာရှင်တွေ အမှန်တကယ်ဂရုမစိုက်ခဲ့ပဲ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်လုံခြုံရေးကိုသာ ဦးစားပေးခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားနေပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသား လုံခြုံရေးအတွက် ဘာတွေကို အာရုံစိုက်သင့်ကြောင်း အောက်ပါဆောင်းပါးမှာ ရေးသားတင်ပြထားပါတယ်)
စစ်အေးတိုက်ပွဲလွန်ကာလရဲ့ အဆိုးဝါးဆုံးသွင်ပြင်လက္ခဏာတရပ်ဟာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များနဲ့ မဟာဗျူဟာများ ချမှတ်ရေးဆွဲမှုတွေကို စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလမှာတုန်းကထက် ပိုပြီးခက်ခဲနက်နဲစေတဲ့ မရေရာမသေချာမှုများ (uncertainties)နဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုများ(complexities) ရောပြွန်းနေသော လုံခြုံရေးဝန်းကျင်(security environment) ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်များက ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံများအကြားမှာ စစ်အင်အားသုံးကျူးကျော်မှုတွေက လျော့နည်းသွားပေမယ့် လက်နက်အင်အားပြိုင်ဆိုင်တိုးချဲ့တပ်ဆင်မှုတွေက ရပ်တန့်သွားခြင်း မရှိပါဘူး။ မြေပိုင်နက်၊ ရေပိုင်နက်၊ ဝေဟင်ပိုင်နက်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွေ၊ စစ်အင်အားပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ ခေတ်မှီလက်နက်များ တိုးချဲ့တပ်ဆင်မှုတွေက နိုင်ငံအများစုရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးမူဝါဒတွေမှာ ထိပ်ဆုံးကနေ နေရာယူထားဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု(terrorism)၊ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု(illicit drug production and trade)၊ လူကုန်ကူးမှု(human trafficking) နဲ့ လက်နက်ကုန်ကူးမှု(arms trafficking) ပြဿနာတွေကလည်း နိုင်ငံတွေရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ခြိမ်းချောက်လျက်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု(political instability)၊ ပြည်တွင်းစစ်(civil wars)၊ လူဦးရေအဆမတန်တိုးပွားမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု(poverty reduction)၊ အဂတိလိုက်စားမှု(corruption) နဲ့ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေး အားနည်းမှု(lack of good governance) စတဲ့ ပြဿနာတွေကလည်း တိုင်းပြည်အများစုရဲ့ နိုင်ငံတော်နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း(state and society) ကို တိုက်ရိုက်ခြိမ်းချောက်လျက် ရှိပါတယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေး (National Security) ဆိုရာဝယ်
John Schlesser ဆိုသူက အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုတာ အစိုးရတရပ်အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ့် ပထမဦးဆုံးနဲ့ အရေးကြီးဆုံး ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုတဲ့သဘောတရားကို ကျဉ်းမြောင်းသောရှုထောင့်နဲ့ ကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်နှစ်မျိုးနဲ့ ရှုမြင်သုံးသပ်ကြပါတယ်။ စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလတလျှောက်မှာ နိုင်ငံ တော်တော်များများဟာ ကျဉ်းမြောင်းသောရှုထောင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီး၊ စစ်အေးတိုက်ပွဲလွန်ကာလမှာတော့ ကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်ကို အသုံးများလာပါတယ်။
ကျဉ်းမြောင်းသောရှုထောင့်အရ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ထိပါးခြိမ်းချောက် ခံရခြင်းမှကင်းဝေးစေရန် စစ်တပ်၊ ရဲ၊ ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းများမှကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆက်စပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပညာရှင် Edmonds ဆိုသူက အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ပြည်တွင်း(သို့မဟုတ်)ပြည်ပခြိမ်းချောက်မှုများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုတာ coercion (ဥပမာ- The use of force) နဲ့ intrusion (ဥပမာ- The use of secret intelligence) ပါဝါများနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပြီး၊ ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ အင်အားသုံးဖြေရှင်းမှုနဲ့ တခြား power instruments များကို မျှတအောင်ချိန်ဆဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်အရ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြရာမှာ လုံခြုံရေးရာနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ နိုင်ငံသားခံယူခွင့်(citizenship)၊ စီးပွားရေးရာလုံခြုံရေး(economic security)၊ ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေး (environmental security)၊ လူသားလုံခြုံရေး(human security) စတာတွေကိုပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြကြပါတယ်။ Stephen Krasner က အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုရာမှာ မူလရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေးကိစ္စတွေတင်မကပဲ၊ စီးပွားရေးလုံခြုံရေး စတဲ့တန်ဖိုးတွေပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျနှေးကွေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်သင့်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အချို့သော ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့ တဦးချင်းလုံခြုံရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေးနဲ့ လူသားလုံခြုံရေးတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ မြေဆီလွှာခြောက်ခန်းမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြုန်းတီးမှု၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ရေကြီးမှု၊ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၊ တန်းတူညီမျှခြင်း မရှိမှု၊ ပညာရေးအဆင့်အတန်း၊ ကူးစက်ရောဂါများ စတာတွေကိုပါ အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာများရေးဆွဲရာမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြကြပါတယ်။
၂၁ ရာစုကာလ၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာများကို လေ့လာသူပညာရှင်များကတော့ နိုင်ငံအများစုရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် ပဓာနကျသောအခြေခံအချက် လေးချက်ရှိကြောင်း ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအချက်လေးချက်ကတော့ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး (Safety)၊ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်(autonomy)၊ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး(Development) နဲ့ အုပ်စိုးမှု(rule) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုရာမှာ တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှကင်းဝေးရေး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားများအနေနဲ့ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနဲ့ မိမိတို့ဘဝကံကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ တပ်မတော်ဆိုတာ ရှိရပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှုများလျော့ပါးစေဖို့ ဥပဒေဘက်တော်သား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိရပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ အော်တိုနော်မီဆိုရာမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရဟာ ပြည်ပသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းတဲ့အစိုးရတရပ် ဖြစ်ရပါမယ်။
နောက်တချက်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာက စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးနဲ့နိုင်ငံရေး တိုးတက်မှုများကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတချက်ကတော့ နိုင်ငံအုပ်စိုးမှုပါ။ အစိုးရတရပ်မှာ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၊ ဥပဒေပြုရေးအာဏာ၊ တရားစီရင်ရေးအာဏာသုံးရပ်ကို စနစ်တကျ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်လေးချက်ကို ၂၁ ရာစု အမျိုးသားလုံခြုံရေး မဟာဗျူဟာများရေးဆွဲရာမှာ နိုင်ငံအများစုက ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာကြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာစစ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစွယ်စုံကျမ်းမှ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာဆိုတာ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာဦးတည်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အာဏာ(state power) ယန္တရားများကို စနစ်တကျပေါင်းစပ်အသုံးပြုရန် ရေးဆွဲထားသောစီမံချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးမှာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာများ ကိုင်စွဲထားကြပါတယ်။ အချို့ မဟာဗျူဟာများက implicit strategies များဖြစ်ပြီး၊ အချို့ကတော့ explicit strategies များ ဖြစ်ပါတယ်။
Implicit strategy ဆိုတာက အခြားနိုင်ငံများရဲ့ နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဝန်းကျင်မှာ ပတ်သက်ဆက်စပ်ပုံ (ဥပမာ- ခြိမ်းချောက်မှုများ၊ နိုင်ငံတော် ရည်မှန်းချက်များမှာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများ စသည်)ကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ပြီး၊ သင့်လျော်တဲ့မဟာဗျူဟာများကို အခြေအနေ၊ အချိန်အခါနဲ့တပြေးညီ ချမှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလမှာတုန်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ Implicit strategy ဟာ ဝါဆောစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့ deterrence ပေါ်မှာ ဗဟိုပြုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်အေးတိုက်ပွဲလွန်ကာလတွေမှာတော့ ဒီလိုဗဟိုပြုမှု နည်းပါးလာပါတယ်။
Explicit strategy ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဝန်းကျင်မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များပြည့်မီအောင် မည်သို့မည်ပုံ ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတာကို အများသို့ အသိပေးကြေငြာထားချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့အစိုးရများကတော့ အမျိုးသား လုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာများ ချမှတ်ရေးဆွဲပြီးတဲ့အခါ အများပြည်သူနဲ့နိုင်ငံတကာကို တရားဝင်အသိပေးကြေငြာထားတတ်ကြပါတယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာများကို ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီများက ရေးဆွဲလေ့ရှိကြပါတယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီများကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများနဲ့ အခြား အစိုးရအမိန့်ကြော်ငြာစာများအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားကြပြီး၊ ပါဝင်လေ့ရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်များကတော့ သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဒုဝန်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သမ္မတလက်ထောက် စတဲ့ ထိပ်တန်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပေးအဖွဲ့ကိုတော့ အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးနှင့် စစ်ဖက်ဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲများ၊ ပညာရှင်များနဲ့ ဖွဲ့စည်းလေ့ ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ပြဿနာများ (အခြားနိုင်ငံများမှ စစ်ကြေငြာခံရခြင်း၊ အရှိန်အဟုန်ကြီးသော ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားလာခြင်း၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း) စတာတွေ ဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီက နိုင်ငံတော်အဆင့် ကွပ်ကဲတာဝန်ပေးမှုများ ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
မဟာဗျူဟာရေးဆွဲရာမှာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာ(National Security Strategy) ကို ကနဦး ရေးဆွဲပြီး၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာ(National Defense Strategy) နဲ့ အမျိုးသားစ စ်ရေးမဟာဗျူဟာ(National Military Strategy) များကို ဆင့်ပွားရေးဆွဲ ကြပါတယ်။ အခြား sub-strategies များဖြစ်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်နှိမ်နင်းရေးမဟာဗျူဟာ(National Strategy for Combating Terrorism) စသည်များကိုလည်း လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ ထပ်မံရေးဆွဲလေ့ရှိကြပါတယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာမှာ အဓိက အချက်ကြီးလေးချက်ကို အခြေခံရေးဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ပထမတချက်ကတော့ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ရည်မှန်းချက်များကနေဆင်းသက်လာတဲ့ တိုင်းပြည်တခုရဲ့ vision ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယတချက်ကတော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား(National Interests) များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတွေက vision ကို ထင်ဟပ်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကျိုးစီးပွားတွေဟာ တိကျပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍများ (အရင်းအမြစ် လုံခြုံရေး၊ တန်ဖိုးထားမှု စံနှုန်းများ ထိန်းသိမ်းရေး၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စသည်များ) ကို ခြုံငုံမိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများကိုမြှင့်တင်ရေးနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ power instruments (သံတမန်၊ သတင်းအချက်အလက်၊ စစ်တပ်နှင့် စီးပွားရေး စသည်များ)ကို သတ်မှတ်ရွေးချယ်ရာမှာ အတားအဆီး၊ ခြိမ်းချောက်မှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာများကိုဆန်းစစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
စတုတ္ထအချက်ကတော့ power instruments များကို စုစည်းသုံးပြုပြီး၊ တိုင်းပြည်ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မယ့် မဟာဗျူဟာချဉ်းကပ်မှု(strategic approach) ကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာဟာ တိုင်းနိုင်ငံတခုအတွက် အရေးကြီးဆုံးမဟာဗျူဟာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာများ ချမှတ်ရာမှာ မှားယွင်းမှုတစုံတရာဖြစ်သွားခဲ့ရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ စစ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များအားလုံးကို သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆန်းစစ်ရာမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်များကတော့
အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများမှ အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာရေးဆွဲရန် တာဝန်ရှိသနည်း။ အစိုးရမဟုတ်သော မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲခြင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သနည်း။
ဥပဒေပြုအာဏာရှိသူများမှ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံထားခြင်း ရှိပါသလား။
မဟာဗျူဟာမှာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုခြိမ်းချောက်နေသောအချက်များကို ဖော်ပြထားခြင်း ရှိပါသလား။ မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ဖော်ပြ ထားသနည်း။
မဟာဗျူဟာမှာ စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံများကို ရည်ညွှန်းထားချက် ရှိပါသလား။
မဟာဗျူဟာမှာ အင်အားသုံးဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများ ပါရှိပါသလား။
မဟာဗျူဟာရေးဆွဲရာမှာ သင့်လျော်သောရည်ညွန်းကိုးကား စာအုပ်စာတမ်းများကို အသုံးပြုခဲ့ခြင်းရှိပါသလား။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာကို ချမှတ်ရေးဆွဲပြီးတဲ့အခါ၊ ဒီမဟာဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရမယ့် မူဝါဒများ ဆက်လက် ရေးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးမူဝါဒများမှာ ကာကွယ်ရေးမူဝါဒ(defence policy)၊ လုံခြုံရေးမူဝါဒ(security policy)၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ(foreign policy)၊ စီးပွားရေးမူဝါဒ(economic policy) စသည်များပါဝင်ပြီး၊ မူဝါဒများအကြားမှာ နီးစပ်စွာဆက်နွယ်မှု ရှိပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးမူဝါဒတွေက နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲကွဲပြားပေမယ့် ကာကွယ်ရေးမူဝါဒ ရေးဆွဲခြင်းကိုတော့ ပထမဦးစွာပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးမူဝါဒများရေးဆွဲခြင်းက အစပြုလို့၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းအဆင့်အထိ အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားမှာ နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အရေးကိစ္စတခု ဖြစ်ပွားလာချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းတာဝန်များ(strategic functions) ကို ကာကွယ်ရေးမူဝါဒထဲမှာ တိကျစွာ ရေးဆွဲပြဌာန်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးမူဝါဒဟာ အစိုးရရဲ့ စက္ကူဖြူစာတမ်း(white paper) ထဲမှာ ပါဝင်ပြီး၊ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေရှိတဲ့အရေးကိစ္စများအတွက်လိုအပ်တဲ့ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဖော်ပြထားရာမှာ၊ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက် ခံရခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ scenarios ခြောက်ခုကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးမူဝါဒများရေးဆွဲရာမှာ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးကို(အပေါ်)သက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့အချက်များကို စုံလင်အောင်ထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဓိက သက်ရောက်စေတဲ့အချက်များကတော့ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု၊ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရေးရာ ထိရောက်မှု၊ လူမျိုးစုရေးရာနှင့် ဘာသာရေးရာပဋိပက္ခများနှင့် တင်းမာမှုများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ပြဿနာများ၊ ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ သံတမန်ရေးရာ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏စစ်အင်အား၊ ဒေသတွင်း စစ်ရေးပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုများ စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးမူဝါဒဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အခြေအနေတွေအပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် အချိုးကျစွာ မူတည် ပါတယ်။ တည်ငြိမ်သောနိုင်ငံရေးရာသီဥတု(stable political climate) ကို ဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက် ကာကွယ်ရေးအင်အားစုများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရေးပါတဲ့အတွက် ကာကွယ်ရေးမူဝါဒများရေးဆွဲရာမှာ တည်ငြိမ်သောနိုင်ငံရေးရာသီဥတုဖန်တီးနိုင်ရေးနဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို ထိပါးစေသောအရာများကို(အား)တုန့်ပြန်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူ့ရေးရာဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများ (ရေပေးဝေမှု၊ လျှပ်စစ်ပေးဝေမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးစသည်များ) မှာ ထိရောက်မှု ရှိခြင်းဟာ အစိုးရဲ့စွမ်းပကားကို မီးမောင်းထိုးပြနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကဏ္ဍများမှာထိရောက်မှုမရှိတဲ့အခါ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ပြည်သူလူထုက ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာပြီး၊ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေမှာ ကာကွယ်ရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းတာဝန်များလည်း ရှိလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူ့ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများရဲ့ ထိရောက်မှုအခြေအနေကို ကာကွယ်ရေးမူဝါဒများရေးဆွဲရာမှာ ထည့်သွင်းသုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လူမျိုးစုရေးနဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာတင်းမာမှုများကနေတဆင့် ပဋိပက္ခတွေ ကြီးထွားလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာကွယ်ရေးမူဝါဒများ ရေးဆွဲရာမှာ လူမျိုးစုရေးဒိုင်မင်းရှင်း(ethnic dimension) နဲ့ ဘာသာရေး ဒိုင်မင်းရှင်း(religious dimension) တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးကလည်း ၂၁ ရာစုရဲ့ ကာကွယ်ရေးမူဝါဒများမှာ မရှိမဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်တချက် ဖြစ်လာပါတယ်။ မြေဆီလွှာပျက်သုဉ်းမှု၊ မိုးခေါင်ရေရှားမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်သက်ရောက်မှု၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုစတာတွေ ဖြစ်ပွားရာမှာ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအင်အားစုများက အရေးပေါ်အခြေအနေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်များရှိတဲ့အတွက် ကာကွယ်ရေး မူဝါဒများမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ scenario များကို လေ့လာသုံးသပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒေသတွင်း စစ်ရေးပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုများကလည်း collective peace and security အတွက် အရေးကြီးတဲ့အတွက် ဒေသတွင်း စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေများနဲ့ ကာကွယ်ရေးအင်အားစုများရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်မှုအခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ကြိုတင်သုံးသပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့ ကာကွယ်ရေးမူဝါဒများကို များသောအားဖြင့် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများနဲ့ ပညာရှင်များပူးတွဲရေးဆွဲလေ့ရှိပြီး၊ လုံခြုံရေးကောင်စီက အတည်ပြုချမှတ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလိုချမှတ်ထားတဲ့ Defense Policy Framework ကိုလည်း အခြေအနေပြောင်းလဲမှုများနှင့်တပြေးညီ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပြီး၊ strategic diagnosis of the defense sector ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို ထာဝစဉ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့ကာကွယ်ရေးမူဝါဒကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးမူဝါဒများရေးဆွဲရာမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များချောမွေ့စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး၊ နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ကာလဖြစ်ပွားလာပါက အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပြိုလဲမှုမဖြစ်ပွားစေရန် လိုအပ်သော ယန္တရားများထားရှိရေး၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကို အခြားစစ်ရေးမဟုတ်သေခြိမ်းချောက်မှုများမှကာကွယ်ရေး စတာတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါတင်မကပဲ ၂၁ ရာစု နိုင်ငံတော်ခြိမ်းချောက်မှုများဖြစ်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ဖြစ်ပွား လာချိန်မှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ လုံခြုံရေးစွမ်းပကားများကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကိုလည်း ကြိုတင်လေ့လာသုံးသပ် ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခြား နိုင်ငံတော်မူဝါဒများဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒများကလည်ဒး အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပေါ်မှာအခြေခံပြီး ရေးဆွဲဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်ရာမှာ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အချက်တခုချင်းဆီရဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အတိုင်းအဆနဲ့ သက်ရောက်မှုပဏာမတွေကိုသုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေ ဆန်းစစ်ချက်မှာ ဖြစ်ရပ် သက်ရောက်မှုများကို စီးပွားရေးရာနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ၊ လူမှုရေးရာအခြေအနေများအပေါ် မူတည်ပြီး ထည့်သွင်းစဉ်းချက်တွေနဲ့ ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလတခုအတွင်းမှာ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားနိုင်ချေတွေကို သုံးသပ်ချက်များ ပါဝင်ပါတယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေ ဆန်းစစ်ချက်များကိုပြုလုပ်ကြရာမှာ နိုင်ငံတခုချင်းစီအလိုက်အသုံးပြုတဲ့ methodology တွေ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးအများစုကတော့ သက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာ(impact) နဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေ အတိုင်းအဆ(Likelihood) တို့အပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ methodology (ပုံ- ၁) ကို အသုံးပြုထားကြပါတယ်။
ပုံ (၁) ရဲ့ ညာဘက်ထိပ်ဆုံးမှာဖော်ပြထားတဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေများဟာ ဖြစ်နိုင်ချေအတိုင်းအဆများသာမက၊ သက်ရောက်မှု အတိုင်း အတာလည်း ကြီးမားပါတယ်။ ဒီလို အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေများကို အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာရဲ့ high priorities စာရင်းမှာ ထည့်သွင်း သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေအတိုင်းအဆများနဲ့ သက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာနည်းပါးတဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုတော့ low priorities စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းလေ့ရှိပါတယ်။ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်းနဲ့ ဦးစားပေးစာရင်း ထည့်သွင်း သုံးသပ်ခြင်းတွေဟာ အနာဂတ်ခြိမ်းချောက်မှုများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မဟာဗျူဟာသတိပေးချက် (strategic notice) ကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် အမျိုးသားလုံခြုံရေးရဲ့ ရေတို၊ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များကို ပြည့်မှီစေနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေဆန်းစစ်ချက်ဟာ မဟာဗျူဟာသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်ဟောစာတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နောင်တချိန်ဖြစ်လာမယ့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တရပ်ဟာ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပွားလာမယ် ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ သေချာသိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေများကို ကြိုတင်သုံးသပ်လေ့လာဖော်ထုတ်ထားခြင်း၊ ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ တုန့်ပြန်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေထားခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို တစုံတရာအတိုင်းအတာတခု အထိ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတွေကို အစိုးရ၊ စစ်တပ်၊ ပြည်သူဆိုတဲ့ “eternal trinity” သုံးရပ်စလုံးက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်တာဝန်ရှိပြီး၊ အစိုးရတရပ်အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ့် ပထမဦးဆုံးနဲ့ အရေးကြီးဆုံးပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုဟာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုပေးရာမှာ နိုင်ငံတော်အာဏာ (state power) ယန္တရားများကို စနစ်တကျပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာ (National Security Strategy) ကို အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီက ချမှတ်ရေးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီမဟာဗျူဟာကို ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ရှုပ်ထွေးဝေဝါးမှုများမရှိသော တိကျသေချာတဲ့ ကာကွယ်ရေး မူဝါဒ၊ လုံခြုံရေးမူဝါဒ၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုလည်းပြဌာန်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီမူဝါဒများမှာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေများကို မည်သို့မည်ပုံတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရန် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းတာဝန်များကို တိကျစွာဖော်ပြလမ်းညွှန်ထားခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက် အစိုးရ၊ စစ်တပ်၊ ပြည်သူများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍများကို လူအများသို့အသိပေးပြောကြားခြင်းစသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးလှပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
Barnett, Thomas P.M. (2004) The Pentagon’s New Map: War and Peace in the Twenty-First Century. New York: G.P. Putnam’s Sons
Baylis, J. et. Al (2002) Strategy in the Contemporary World, Oxford, OUP
Betts, R. (2000)” Is Strategy an illusion?” International Security, Vol. 25, No.2, Fall 2000
Campbell, KurtM., andMichael E. O’Hanlon. Hard Power: The New Politics of National Security, New York: Basic Books
Drew, Dennis M., and Donald M. Snow (2006) Making Twenty-First-Century Strategy: An Introduction to Modern National Security Processes and Problems. Maxwell Air Force Base: Air University Press
Edmonds, M. (1971) “Armed Forces and the National Security System: The meaning and basics of compliance”, in ed. Holloway, D., European Military Institutions, USSG, Edinburgh
Erica-Irene, A. (1990) Freedom of the individual under Law: An analysis of Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights, Human Rights Study Series No.3, UN publications
Karesner, S. (1983) “National security and Economics”, in Trout, T., Herf, J. (eds) National Security Affairs, New Brunswick: Transaction Books
International Military and Defense Encyclopedia (1993), pp. 2577-78. NY: Brassey’s (US)
Luttwak, E. (1987) Strategy : The Logic of War and Peace, Harvard, Belknap
Liddell Hart, B. H. (1967) Strategy: The Indirect approach, London, Faber & Faber
Murray, W. et. al. (1994) The Making of Strategy: Rulers, States & Wars, Cambridge, Cambridge University Press
Paret, P. (ed) (1986) Makers of modern strategy from Machiavelli to the Nuclear age, Princeton University Press
Pearce & Robinson (1997) Strategic Management: Formulation, Implementation and Control, London, IRWIN
Remark by John Schllesser, Quoted in Fitz-Gerald, A. (2007) Developing inaComprehensive approach to national security, Chatham House Debate, 21 Feb 2007